[Ankapobeny ] 12 Febroary, 2010 10:16
Sarisary sy ny krizy
sary tao @ midi madagasikara
sary tao @ reflexiums.wordpress.com
sary tao @ povonline
sary tao @ courrierdemada
[Ankapobeny ] 04 Febroary, 2010 12:48
Novakin'ny mpiasa ny orinasa COSMOS
May volo tratra ny mpiasa ny zone satria dia mihatra ity ny sazy ary voa mafy ny orinasa afa kaba Cosmos orinasa mampiasa olona any @ 3000 any ho any. Tsy misy lalam-barotra intsony noho ny AGOA tapaka. Vokany dia nikatona io orinasa io ankehitriny. @izao fotoana anoratako eto izao dia ireny tazako eto ireny ny mpiasa @ io orinasa io mitaona ny entana rehetra ao ampiasana sy ny vokatra vita ny orinasa samy mitaona izay zakany izy ireo ankehitriny "vaky bal" e hoy ry zala izay. Misy mitondra ankajoba, Tshirt, sy ny entana vokarina maro hafa samy mitondra izay zaka ireo mpiasa indrisy tena mahantra ramalagasy ka lasa zary raikitam-pisaka ilay fandrobana. Vita tanteraka koa ny @ io orinasa io satria dia tsy ho tafarina intsony na hiverina ary ny AGOA. Dia efa mitadiava asa koa inona moa.
Manarak'izay dia nanohina ny foko ny nandre ny tenin'ilay praminisitra foza oe hanaovana fanazaran-tena ny tafika sadc fa aleo ho avy!!! tena fanaovana tsinotsinona ny miaramila malagasy izany amiko indrindra ny oe izay maty eo dia omentsika marimboninahitra marobe satria maty ho an'ny tanindrazana. Koa angaha moa tsy azo sorohona ny ady mba tsy hisy e! fa tsy mitsoatsoana ohatr'izany. Hany ka mampitsangam-bolo ny mierirteritra ny ho avy ny malagasy. Koa raha tonga moa ny sadc ka misy manome vola be @ izay ireo miaramila gasy hikomy sy hanao aza lambo ny lehibeny tsy ho tantara ny ahazo ny mpitarika foza!!! aza hitako aza mahita. Re mantsy izao fa maro ireo toby miaramila mitady hikomy @ io resaka vola io ihany. Tantara mitohy!!!
sary nalaiko tao @ taratra androany 4/02/2010
Anjarantsika no mandinika sy mieritreritra.